कोरोनाबाट दुवैमा पहिलाेपटक नेपाली महिलाको मृत्यु, काे हुन उनी ? — Imandarmedia.com
कोरोनाबाट दुवैमा पहिलाेपटक नेपाली महिलाको मृत्यु, काे हुन उनी ?
काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा पहिलाेपटक घरेलु काममा गर्ने ४० वर्षीय एक महिलाको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । देवदह–६ बुटवलकी ती महिलाले पेट दुख्यो, मुटु दुख्यो भन्दै आफन्तलाई जानकारी गराएकी थिइन्।
उनी कार्यरत घरमा शुक्रबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेपछि अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालले उनलाई शुक्रबार नै मृत घोषणा गरेको थियो। तर, रिपोर्ट आइसकेको थिएन। कान्तिपुर दैनिकले समाचार लेकाे छ ।
यूएईमा सोमबार थप तीन नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। हालसम्म ११ जना पुगेको छ। तीमध्येदुई जनालाई निको भइसकेको छ। यूएईमा सोमबारसम्म २ हजार ७६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एकसय ६७ जनालाई निको भइसकेको छ। ११ जनाको मृत्यु भएको छ।
यसैबीच सरकारले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । दुई हप्तादेखि जारी लकडाउनलाई सरकारले वैशाख ३ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
काेनाबाट देश जाेगाउनका लागि लकडाउन पालना गर्न र घरभित्रै बसेर सहयाेग गर्न सरकारले सबैलाई अनुराेध गरेकाे छ । यस्तै सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
अधिकारीले राष्ट्र बैंकको खरदार सरहको सहायक पदबाट जागिर सुरु गरेका थिए। भारतको मद्रासबाट चार्डट एकाउन्ट अध्ययन पूरा गरी फर्किएपछि अधिकारी उप निर्देशक बनेका थिए।
हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा अधिकारी डेपुटी गभर्नर थिए। डेपुटीबाट अवकाश पाएका उनी केही समयमै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले उनलाई बोर्डको सिइओमा नियुक्त गरेको हो। बोर्डमा दुई महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै अधिकारी गभर्नर भएका हुन्।
भारतबाट फर्किएका दुई नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सुदरपश्चिमका स्थानीय सरकारहरूले संक्रमण फैलिन नदिने तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छन्। कोरोनासँगको लडाइँमा उनीहरूले दुइटा नीति तय गरेका छन्।
पहिलो, संक्रमण फैलन रोक्ने। दोस्रो, उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याउने। स्थानीय सरकारहरूले भारतबाट आएका नेपालीलाई क्वारेन्टिनमा राखिरहेका छन्। गाउँका विद्यालय क्वारेन्टिनमा रूपान्तरण भएका छन्। भारतबाट फर्किएर घरमा बसिरहेका कतिपयको निगरानी स्थानीयस्तरमै मिलाएका छन्।
भारतबाट नाका पार गरेर भित्रनेहरूबाट हामी भयभित छौं। नगररपालिकामा विदेशबाट भित्रिएका ८६१ मध्ये ८ सय ५४ जना भारतबाट आएका छन्। अहिले भारतबाट आएकामा पनि कोरोना देखिएको अवस्था छ। हामीले नगरपालिकामा रहेका १०३ महिला स्वयमसंवेकीलाई जनचेतना फैलाउन प्रयोग गरेका छौं। नौ वटै वडामा विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य समिति बनाएका छौं।
यस्ता समितिमा २ सय ४१ जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूले वडाअनुसार क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको स्थिति अवलोकन गर्नुहुन्छ। सबै वडा अध्यक्षसहित मेरो सम्पर्क नम्बर नगरपालिकाको फेसबुकमा राखेको छु। क्वारेन्टिनमा नरहे पनि कोरोनाका लक्षण देखिए सेती अञ्चल अस्पताल पुर्‍याएर स्वाब टेस्ट गराउने तयारी गरिरहेका छौँ।
हामीले भारतबाट आएका ७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौं। कसैलाई शंका लागेमा वडा अध्यक्ष वा स्वास्थ्य इकाइमा सम्पर्क गर्न सक्छ। सबै ६ वटा वडामा इकाइ छन्। हामीसँग एउटा एम्बुलेन्स छ। पिपिईको अभावले स्वास्थ्यकर्मीलाई दिन सकेका छैनौं। भएका ७ वटा पिपिई आपतकालिनको लागि भनेर राखेका छौं।
स्वास्थ्यकर्मीले पञ्जा र मास्कको भरमा काम गरिरहनु भएको छ। हामीसँग २५ जना स्वास्थ्यकर्मी छन्। चीनबाट पिपिई आउँछ भनेको मात्र सुनेको हो तर अहिलेसम्म आएको छैन। सबै वडाको गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्दैन। त्यस्तो गाउँमा स्टेचरको व्यवस्था गरेका छौं।
अलिकति विकट भएकाले यातायातको समस्या छ। कुनै गाउँमा फोन लाग्दैन। त्यस्तोमा आधा घन्टा हिँडेर डाँडामा उक्लेर फोन गर्नुपर्छ। हामीसँग बिरामीको स्वाब झिक्ने स्वास्थ्यकर्मी छैनन्। हामीले बिरामीलाई धनगढी नै पुर्‍याउनु पर्छ। यहाँबाट दुई घन्टा लाग्छ।
हरेक वडाले क्वारेन्टिन वार्ड बनाएका छन्। बिरामीलाई बोकेर लैजानका लागि १७ वटा स्ट्रेचरको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा वडामा स्थानीयस्तरमै बनाइएका १७ सय देखि २ हजारवटासम्मका मास्कहरू वितरण गरिएको छ। साबुन पानीले हात धुन सहज होस् भनेर नसक्नेहरूका लागि साबुनको व्यवस्था गरेका छौं।
एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान रोकेका छौं। अर्को गाउपालिकामा जान पर्‍यो भने अनुमति लिएरमात्रै जान पाउने बनाएका छौं। लक डाउनका कारण खाद्यान्नमा असर नपरोस भनेर चामल, नुन मगाएका छौं।
हामीले चैत ८ गत नै कोरोना संक्रमण रोक्न तयारी थालेका थियौं। नेपालगञ्जमा पाइएको एउटा ज्वरो जाँच गर्ने थर्मल गन ल्यायौं। ११ गते हुम्ला र भारतबाट आउने नाकामा हेल्थ डेस्क राख्यौं। सात वटामध्ये दुइटा वडामामात्र स्वास्थ्य चौकी थियो। बाँकी वडामा पनि स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्यायौं। हामीसँग एम्बुलेन्स छैन।